Ambatofitorahana: Fanararaotam-pahefana sy herisetra nataon'ny Tafika
vendredi, 19 juin 2020 21:25
Nitondra fitarainana teo anivon’ny Vondrotobim-pileovan’ny Zandary Amoron’i Mania ny Ben'ny tanànan’ny Kaominina Ambatofitorahana ny 17 jona 2020 teo, momba ny fanararaotam-pahefana sy herisetra tsy ara-drariny ary fisavana trano tsy ara-dalàna nataon'ny Tafika tao amin’ny Kaominina iadidiany.
Nambaran’ny Ben'ny tanàna Ambatofitorahana fa nisy mpanara-dia omby very avy any amin’ny Kaominina Fiadanana, Distrika Ambohimahasoa, niaraka amin’ny miaramika miisa dimy tonga tao an-tanànan’i Morarano, Fokontany Miandrifaikona, Kaominina Ambatofitorahana, Distrika Ambositra ny 09 jona 2020.
Tsy hita mazava ny tena dia nidiran'ireo omby voalaza fa very avy any Fiadanana rehefa natao ny famoahana ny dia. Rehefa tsy tafavoaka ny dia, nanao fisavana trano ireo miaramila niaraka tamin’ny mpanara-dia omby very ka nisy basim-borona niampy vola 400 000 Ar nofaohon'izy ireo. Niezaka ny nampiseho taratasy maha azy ny basim-borona ny tompony fa mbola nentin’ireo miaramila hatrany ilay basy.
Nisy vehivavy naratra noho ny daroka natao azy koa tao amin'io tanànan’i Morarano io ka voatery nentina notsaboina tao amin’ny CSB Ambatofitorahana.
Tsy nampandre ny Zandary ao amin’ny Brigady Ambatiforahana izao tranga izao ny Fokonolona tany an-toerana sy ny mpanara-dia niaraka amin’ireo miaramila.
Misokatra ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ny Zandary amin’izao fotoana.